बुधबार करीब १४ अंकले बढेको नेप्से परिसूचक बिहीबार ओरालो झरेर १ हजार ५९० विन्दुको हाराहारीमा ओर्लिएको छ।
चन्द्रागिरी हिल्स र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्ससहित दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको साधारण शेयर आउँदै
साधारण शेयर निष्कासन गर्न अनुमति मागेका अधिकांश कम्पनी जलविद्युत् क्षेत्रका छन्। चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड, डिस मिडिया नेटवर्क, इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड जस्ता कम्पनीले पनि साधारण शेयर जारी गर्ने तयारी गरेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प कोरोना संक्रमित भएपछि संसारभरिको शेयर बजारमा गिरावट
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्पलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि संसारभरिका ठूला शेयर बजार तथा अमेरिकी स्टक फ्युचर्समा गिरावट आएको छ।
निषेधाज्ञाका बीच पनि शेयर बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि, रु. २ अर्ब ६५ करोडको कारोबार बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से २१.१० अंकले बढेको छ । खरिदमा लगानीकर्ताको उत्साहसँगै नेप्से परिसूचक १ हजार ४६२ विन्दुमा पुगेको छ ।
अर्थतन्त्रमा शिथिलता, शेयर बजारमा उत्साह कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको संकटका कारण अर्थतन्त्रमा गहिरो धक्का पुगेपनि शेयर बजार परिसूचक नेप्से भने लगातार बढिरहेको छ।गत सातादेखि लगातार बढिरहेको नेप्से मंगलबार ९.३४ अंकले बढेर १ हजार ४४१ विन्दुको नजिक पुगेको छ। निषेधाज्ञाका कारण आवतजावत बन्द भएपनि अनलाइनमार्फत सोमबार रु. १ अर्ब ८५ करोडको शेयर किनबेच भयो।
नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन नेप्सेमा उच्च वृद्धि
शेयर बजार परिसूचक नेप्से नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो दिन ३२.४२ अंकले बढेको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन नेप्से १५ अंकले बढ्यो
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम दिन बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से १४.९ अंकले बढेको छ । यो सँगै नेप्से परिसूचक १ हजार ३६२ विन्दुमा पुगेको छ।
ब्याङ्कका सहायक कम्पनीलाई शेयर कारोबार गर्न ब्रोकर लाइसेन्स दिन सुझाव संघीय संसद् प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको उपसमितिले ब्याङ्कका सहायक कम्पनीलाई शेयर कारोबार गर्न ब्रोकर लाइसेन्स दिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ।
अघिल्ला दुई दिन उछाल आएको शेयर बजारमा बिहीबार नकारात्मक सर्किट ब्रेकर शेयर बजार ६ प्रतिशतले घटेपछि बिहीबारको कारोबार स्थगित गरिएको छ । बजार खुलेको केही बेरमै घट्न थालेको नेप्सेमा तीन पटक नकारात्मक सर्किट ब्रेकर लागेर १ घण्टा ४० मिनेटमै कारोबार रोकिएको हो।
शेयर बजार सोमबारदेखि खुल्दै झण्डै तीन महीना बन्द भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सोमबारबाट खुल्ने भएको छ।